Migrationsverket: xoog ayaan uga saareynaa xeryaha qaxootiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Migrationsverket: xoog ayaan uga saareynaa xeryaha qaxootiga
La daabacay tisdag 10 maj 2016 kl 13.45
"Ma derbiyadaan seexdaa, maxaan sameeyaa?"
Migrationverket oo sheegay in ay adeegsanyaan bolis si xaqootiga sharciyada loo diiday xeryaha looga saaro. sawir: Björn Olsson/TT, Simon Rissvik/SR
4 500 oo ah qaxooti loo diidey deganaanshaha oo lagu wargeliyey in laga goosanayo lacagaha, lagana saarayo xeryaha qaxootiga.
Kowda bisha jun waxaa hirgalaya isbaddel lagu sameeyey sharciga qabilaada qaxootiga. Hey’adda socdaalka ayaa todobaadyadii ugu denbeeyey u dirtay warqad lagu wargelinayo dadka sharciyada loo diidey ee qaangaarka ah oo carruurta heysanin in laga goosanayo dhaqaalaha la siiyo, ayna tahay in ka guuraan xaruumaha qaxootiga waxii ka bilowda 1 jun oo sharcigaan hirgeli doono.
Midka mid ah dadka waraaqda Migrationsverket u soo dirtay waa Ahmed Yasin oo ah 19 sanno jir ku nool xero qaxooti oo ku taala banaanka Jönköping. Waxaana la soo gudboonaadey welwel badan markii warqaddan soo gaartay.
Welwel badan baan dareemay markii lagu yeri kaamka ayaa lagaa saaraya.
Ahmed Yasin keligiis ma ahan dadka uu taabanayo isbaddelka lagu sameynayo sharciga qaabilaada qaxootiga waxii laga gaaro kowda juni. Isbeddelkan oo ah heshiis ay horey u gaareen xisbiyada mucaaradka ah iyo kuwo dowladda, kaas oo dhigaya in laga joojiyo dhaqaalaha la siiyo, lagana saaro xaruumaha qaxootiga dadka laga siiyey diidmo magangeliyo doonkooda balse ka dhago adeygay in ay dalka ka baxaan oo dib u noqdaan, inkastoo isbeddelka cusub laga reebay qoysaska carruur leyda ah iyo da’yarta.
Isbeddelka dhawaan hirgalaya ayaa taaban doona dad kor u dhaafaya 4 500 oo ruux, 1 500 oo ka mid ah dadkan waxay ku noolyahiin xaruumaha la dejiyo qaxootiga. Hey’adda Migrationsverket ayaa todobaadyadii la soo dhaafay uwado dirtay waraaqo lagu wargelinayo dhamaan dadyowga uu taabanayo isbeddelka cusub in laga goosan doono dhaqaalaha la siiyo, kuwadooda ku nool xaruumaha qaxootigana looga fadhiyo in ay iskaga guuraan goobahas.
Ururka Rådgivningsbyrå för asylsökande och flyktingar oo ah urur siiya talaayin dadyowga magangeliyo doonka ah ayaa dhawaanahan waxaa soo wacayey dad aad u faro badan oo ka welwelsan waraaqaha kaga yimid hey’adda Migrationsverket, sida uu noo sheegay Anders Sundqvist oo ah xeer yaqaan sare oo ka howl-gala ururkan. Aad ayuuna u dhaleeceysan yahay in hey’adda socdaalka uwada dirto warqad isku mid ah dhamaan dadka diidmada heysta:
- Waxay u muuqataa in Migrationsverket uwado dirtay warqad isku mid ah dhamaan dadka laga gaaray go’aan dal ka masaafurin ah, xataa haddii aysan suurtogal aheyn in dalka laga saaro, waxaad moodaa in hey’adda kalo jecleyn. Dad aad u faro badan ayaa na soo wacayo o ona weydiinaya, maxaa hadda dhaci doona, ma banaanka ayaa lay tuuri doonaa, ayuu yeri xeer yaqaan Anders Sundqvist.
Waxuu kaloo sheegay in ay hey’adda socdaalka la xiriireen balse hey’adda ku gaabsatay ”hadey wax gaar ah jiraan qof ha la xiriiro gacanyarahiisa qeybta qaabilaada oo dhibka jira ha u sheegto” ayuu sheegay hey’adda ku tiri asaga. Balse waxuu raaciyey waraaqahan dadka loo diray ay welwel badan ku rideen qaxootiga faro badan oo garaneynin waxay ka micno yahiin.
- Waxaa anniga ila fiicnaan laheyd in hey’adda ay sidaan ka taxar badan tahay oo ay fiiriyaan qofka ay warqad u dirayaan. Waxay aheyd in ay kiis kasta goonidiisa u eegaan oo isweydiiyaan qof ma yahay qof xaaladiisa wax ka baddeli kara, waxaan gaarnay go’aan dal ka masaafurin balse suurtogal matahay in la meelmariyo, iyadoon loo eegneynin in qofka doonayo in uu iskiis u baxo iyo in kale, marka ma ahan in loo soo diro warqadan, ayuu yeri Anders Sundqvist oo ka socda ururka Rådgivningsbyrå för asylsökande och flyktingar.
Laakiin Kristina Rännar oo Migrationsverket u qaabilsan waaxda dib u celinta sheegtay in hey’adda u aragto in ay yaryahiin dadka aan iskood dalka uga abxi karin.
Waxaan qiimeyneynaa in ay yaryahiin dadka heysta diidamada ee aan iskood dalka uga baxi karin dibno ugu noqon karin halkii ay ka yimaadeen. Waana middas waxaan duulno oo aan fileynaa oo rajeyneynaa in inta badan shaqsiyaadkan u hoggaasami doonaan go’aankan, ayey tiri Kristina Rännar oo socota Migrationsverket.
Kuwa aan u hoggaansamin go’aanka ah in ay iskaga guuraan xarumaha qaxootiga marka la gaaro kowda Juni oo sharciga qaabilaada isbeddel lagu smaeynayo ayey hey’adda Migrationsverket sheegtay in ay u adeegsan doonaan awood si looga saaro xaruumaha qaxootiga.
Kuwa diida in ay iskaga baxaan xeriyaha qaxootiga waxaan u adeegsan doonaa awood oo ciidamada boliska ayaan ugu waci doonaa, ayey tiri Kristina Rännar oo dib u celinta u qaabilsan Migrationsverket.
Ilkacase:nolal kuma heysano Sweden
onsdag 21 oktober 2015 kl 12.30
fredag 4 mars 2016 kl 10.31
5000 qof oo magangalyodoon ah oo sharciga loo diiday
tisdag 28 oktober 2014 kl 13.06
Soomaalida sharci la'aanta ku ah Sweden iyo xaaladooda nolaleed
torsdag 22 oktober 2015 kl 14.01
Warbixin: Soomaalida dib looma tarxiili karo
tisdag 20 oktober 2015 kl 09.43
Soomaalida sharci la’aanta ku ah Sweden iyo xaaladdoda nolaleed
måndag 19 oktober 2015 kl 11.01